Baby Magic Gentle Baby Lotion (Soft Cotton Blooms) 488ml - Sky Blue | Buy online | SHOP.COM.MM
Baby Magic Gentle Baby Lotion (Soft Cotton Blooms) 488ml - Sky Blue
Baby Magic က lotion လေးက ကလေးတွေအတွက် အန္တရာယ်ကင်းကင်း အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ Read more Hide
Pan Thazin Wei
Baby Magic လိုးရှင်းတွေက အနံ့လေးသင်းပြီး ကလေးခန္ဓာကိုယ်မှာ တစ်နေ့ကုန် အမွှေးနံ့စွဲနေတာမို့ အရမ်းသဘောကျပါတယ်။ Read more Hide
Baby Magic body lotion လေးက အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အသားအရေကို နူးညံ့စေပြီး တခြားဘာ side effect မှမရှိဘူး။ Read more Hide
for both my baby and me
My go-to facial moisturizer! I love this Baby Magic product for both my baby and me :) I use this on my face day & night. Read more Hide
Specifications of Gentle Baby Lotion (Soft Cotton Blooms) 488ml - Sky Blue